အကောင်းဆုံးတရုတ်တက်ဘလက်များ - စက်တင်ဘာလ ၂၀၂၁ တွင်နောက်ဆုံးရေးသားချိန် Androidsis ပါ
ဟိုဆေး Alfocea | | တရုတ် Android, Android တက်ဘလက်များ
တက်ဘလက်တွေအတွက်စျေးကွက်ကအရင်တုန်းကလိုမဟုတ်တော့ဘူး။ လွန်ခဲ့သောခုနစ်နှစ်ကစတင်ခဲ့သောကန ဦး တိုးတက်မှုအပြီးတွင်လေးပုံတစ်ပုံရောင်းချပြီးနောက်လေးပုံတစ်ပုံရောင်းအားကျဆင်းခဲ့သည်။ အပြစ်တင်တာကသူတို့လုပ်နိုင်တဲ့ကတိပျက်ပြားမှုကြောင့်ဖြစ်တယ် ကွန်ပျူတာများကိုအစားထိုးပါယခုမှသာလျှင်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းစတင်ခံစားရသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူမိုဘိုင်းဖုန်းများ၏မျက်နှာပြင်အရွယ်အစားအလွန်များပြားလာခြင်းကြောင့်အသုံးပြုသူများစွာသည်၎င်းတို့၏တက်ဘလက်ကိုဖယ်ရှားရန် (သို့မဟုတ်၊ ၀ ယ်ရန်မရွေးချယ်ရန်) အထူးသဖြင့်စမတ်ဖုန်း၏အရွယ်အစားနှင့်ပိုမိုနီးစပ်သူများကို ဦး ဆောင်ခဲ့သည်။ မိုဘိုင်းသည်တက်ဘလက်နှင့်တူညီသည်။
အထက်ပါအချက်များအားလုံးရှိနေသော်လည်း တက်ဘလက်ဈေးကွက်သေပြီမဟုတ်ပါဘူး။ ထုတ်လုပ်သူများကမူမော်ဒယ်အသစ်များကိုထုတ်လွှတ်ပြီးသူတို့မှာစျေးကွက်ထဲတွင်ရှိနှင့်ပြီးသောအရာများကိုမွမ်းမံသည်။ အသုံးပြုသူအားလုံးနီးပါးအတွက်အိတ်ကပ်အားလုံးနီးပါးအတွက်တက်ဘလက်တွေရှိတယ်။ သင်၌တက်ဘလက်မရှိသေးသော်လည်းသင်ရရှိရန်အချိန်ရောက်လာပြီသို့မဟုတ်သင်၌တက်ဘလက်တစ်ခုရှိပြီးသားဖြစ်သော်လည်းပိုမိုအစွမ်းထက်။ ပိုမိုပေါ့ပါးသောမော်ဒယ်လ်ဖြင့်အသစ်ပြုပြင်ရန်အချိန်တန်လျှင်၊ ၎င်းတို့သည်အဘယ်အရာကိုသင်ပြပါလိမ့်မည်။ ဖြစ်ကြသည် ယခုအချိန်တွင်၏အကောင်းဆုံးတရုတ်တရုတ်တက်ဘလက် ထို့အပြင်သင့်လိုအပ်ချက်များနှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်သောတက်ဘလက်ကိုရွေးချယ်နိုင်ရန်အတွက်အသုံးဝင်သောအကြံပြုချက်အနည်းငယ်ပေးပါမည်။
1 ယခုအချိန်တွင်၏အကောင်းဆုံး9တရုတ်တက်ဘလက်
1.1 Chuwi Hibook Pro မှ
1.2 ကျနော်တို့ Xiaomi က Pad 2
1.3 Teclast X16 ပါဝါ
1.4 Teclast X16 Pro ကို
1.5 Chuwi Vi10 Pro ကို
1.7 Huawei Mediapad M2 ၁၀
ယခုအချိန်တွင်၏အကောင်းဆုံး9တရုတ်တက်ဘလက်
တက်ဘလက် ၁၀ လက်မ ...
တက်ဘလက် ၈ လက်မ Android ...
တက်ဘလက် ၁၀ လက်မ ၈ Core ...
အောက်ပါအကောင်းဆုံးတရုတ်တက်ဘလက်များရွေးချယ်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားစာဖတ်သူများအကြိုက်ဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ သင်၏ရွေးချယ်မှုအတွက်သင့်အားကူညီမည့်အဆိုပြုချက်တစ်ခုအဖြစ်၎င်းကိုယူဆောင်ပါ ကျွန်ုပ်တို့ယခင်ကပေးခဲ့သောအကြံဥာဏ်များ။
Chuwi Hibook Pro မှ
ဒီတက်ဘလက်ကို Chuwi တံဆိပ်မှစတင်သည်။ ၎င်းသည်သင့်အတွက်အနည်းငယ်သာအသံဖြစ်ဖွယ်ရှိသည်၊ ၎င်းသည်၎င်း၏အမည်ကိုရယ်စရာကောင်းနိုင်ဖွယ်ရှိသော်လည်းအမှန်တရားမှာ၎င်းသည်အကောင်းဆုံးတရုတ်တက်ဘလက်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါ Chuwi Hibook Pro မှ တစ် ဦး ရက်ရက်ရောရောမျက်နှာပြင်နှင့်အတူ 10,1 လက်မ 2560 x 1600 resolution နှင့်အတူကြီးမားသော 8.000 mAh ဘက်ထရီ အတွင်းပိုင်းတွင် ၁.၈၄GHz quad-core Intel X5 Atom Cherry Trail Z8300 နှင့် Intel HD Graphic Gen1.84 GPU တို့ပါရှိသည်။4GB RAM နှင့်သိုလှောင်မှု 64GB Memory card နဲ့ 64 GB အထိတိုးချဲ့နိုင်ပါတယ်။ အကောင်းဆုံးကတော့ဒါဟာ dual-tablet ပါ Windows 10 နှင့် Android 5.1 နှစ်ခုလုံးတွင်အလုပ်လုပ်သည်.
ကျနော်တို့ Xiaomi က Pad 2
တရုတ်ကုမ္ပဏီကြီး Xiaomi သည်အသွင်အပြင်ကိုဘယ်တော့မှမရပ်နိုင်ပါ ကျနော်တို့ Xiaomi က Pad 2အလွန်ပေါ့ပါးပြီးပါးလွှာပြီးအရင်စီမံထားသည်ထက်ပိုမိုစီမံခန့်ခွဲနိုင်သည်။ ဒါဟာမျက်နှာပြင်တစ်ခုရှိပါတယ် 7,9 လက်မ, Intel Atom X5-Z8500 quad-core ပရိုဆက်ဆာ၊ 2GB RAM၊ 16GB Internal Storage နှင့် Android 5.0 operating system ကို MIUI အမှတ်တံဆိပ်စိတ်ကြိုက်အလွှာအောက်တွင်ရှိသည်။
Teclast X16 ပါဝါ
သင်လုပ်ချင်တဲ့အရာကအလုပ်အတွက်တက်ဘလက်ဖြစ်နေရင်၊ ဒါကအကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ်။ ၎င်းသည် Teclast X16 ပါဝါ၊ မျက်နှာပြင်ပါသည့်ကိရိယာဖြစ်သည် ၁၁.၆ လက်မ၊ ၄ GB RAM နှင့် dual operating system ၎င်းသည် Windows 10 နှင့် Android 5.1 တို့နှင့်အလုပ်လုပ်သည်။ တကယ်တော့သူကတက်ဘလက်တစ်ခုထက် laptop တစ်လုံးနဲ့ပိုတူတယ်၊
"Power" မော်ဒယ်ပြီးလျှင်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကိုဤပုံစံဖြင့်ပြန်လုပ်ပါ ကုန်ပစ္စည်းမရှိပါ။ယခင် tablet များထက်“ ပိုမိုတက်ဘလက်” သောကိရိယာတစ်ခုသည်ခရီးဆောင်ရလွယ်ကူပြီး၎င်း၏အမျိုးအစားရှိအခြားတက်ဘလက်များနှင့်ဆင်တူသည်။
ဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်တစ် ဦး ကိုရှာပါ ၁၀.၁ လက်မ Full HD မျက်နှာပြင် 1200 x 800 megapixel resolution ဖြင့်ဖော်ပြပေးနိုင်ပြီး၎င်းအတွင်း၌ ၁.၄၄ GHz quad-core Intel T4 Z8500 ပရိုဆက်ဆာပါဝင်ပြီး 1,44 GHz သို့ရောက်ရှိနိုင်သည်။ RAM ကို4GB အထိ ထပ်မံ၍ operating system ၏ duality: Android 5.1 နှင့် Windows 10.
Chuwi Vi10 Pro ကို
Intel HD Graphic (Gen 10) quad-core ၂.၁၆ GHz အမြန်နှုန်း၊ ၂ GB GB ဖြင့်လည်ပတ်နိုင်သည့်စနစ်နှစ်ခုဖြစ်သော Windows 8.1 နှင့် Android 4.4 ကိုအသုံးပြုနိုင်သော Chuwi Vi7 Pro တက်ဘလက်မော်ဒယ်ကိုပြသရန် Chuwi အမှတ်တံဆိပ်သို့ကျွန်ုပ်တို့ပြန်သွားသည်။ RAM နှင့် ၁၀.၆ လက်မမျက်နှာပြင်။
အဓိကစကားလုံးကဒါပဲ Lenovo Yoga Tab3Pro X90Fမျက်နှာပြင်ပါသောအထင်ကြီးစရာကောင်းသည့်တက်ဘလက် 10,1 လက်မ ၁.၄၄ GHz quad-core Intel Z1600 ပရိုဆက်ဆာကို 2560 GB RAM နှင့်အတူဖုံးကွယ်ထားသော 8500 x 1,44 Resolution ရှိသော IPS၊ GB အထိသိုလှောငျ 32 မှတ်ဉာဏ်ကဒ်ဖြင့်တိုးချဲ့နိုင်သောအရာ၊ အန်းဒရွိုက် 5.1 လည်ပတ်မှုစနစ်နှင့် ၁၀,၂၀၀ mAh ဘက်ထရီကိုကကတိပေးထားသည် တစ်ခုတည်းတာဝန်ခံအပေါ် "အထိ 18 နာရီ" ၏ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်.
Huawei Mediapad M2 ၁၀
လက်ရှိတရုတ်နိုင်ငံ၏အကြီးဆုံးစမတ်ဖုန်းထုတ်လုပ်သူများလက်ထဲမှဤအချက်သည်လာသည် Huawei Mediapad M2 ၁၀မျက်နှာပြင်ပါ ၀ င်သည့်တက်ဘလက်တစ်ခုဖြစ်သည် ၁၄ လက်မ Full HD 1920 x 1200 megapixel resolution ဖြင့်အသုံးပြုနိုင်သည်။ အတွင်းပိုင်းတွင်နာရီအမြန်နှုန်း 930 GHZ ဖြင့် Core ရှစ်ခုပါရှိသော HuSilicon Kirin 2,0 ပရိုဆက်ဆာ (Huawei ကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်သည်) ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိရသည်။ ၎င်းနှင့်အတူ2GB RAM၊ 16 GB တိုးချဲ့နိုင်သော internal storage, 6.600 mAh ဘက်ထရီ, လက်ဗွေအာရုံခံကိရိယာ, 13 MP ကင်မရာ autofocus,f/ 2.0 aperture နှင့် flash, နှင့် EMUI 5.1 စိတ်ကြိုက်အလွှာအောက်ရှိ Android 3.1 Lollipop operating system နှင့်အတူ။
သင်လိုချင်တာကကောင်းမွန်ပြီးအလွန်စျေးပေါတဲ့ tablet ဖြစ်ပါကအထူးသဖြင့်ရံဖန်ရံခါအသုံးပြုရန်အတွက် ၇ လက်မ HD မျက်နှာပြင်နှင့် 708 x7resolution ရှိသည့် MediaTek MT1200 ပရိုဆက်ဆာနှင့် 800 GHz အမြန်နှုန်းဖြင့်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ , 6592 GB RAM နှင့် Android 1,5 ။
Cube အမှတ်တံဆိပ်သည်အထူးသဖြင့်စမတ်ဖုန်းကဏ္theတွင်လူသိများသည်။ သို့သော်၎င်းတွင်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာပြီးအရည်အသွေးကောင်းမွန်သည့်တက်ဘလက်များလည်းရှိသည်။ 10,6 လက်မ Intel Z3735F quad-core 1,8 GHz ပရိုဆက်ဆာ၊ RAM2GB၊ ROM 32 GB နှင့်လည်ပတ်မှုစနစ်နှစ်မျိုး၊ Android 4.4 နှင့် Windows 10 တို့ပါဝင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့အစပြုပြီးပြီဖြစ်သောကြောင့်၎င်းသည်လက်ရှိစျေးကွက်တွင်သင်တွေ့ရှိနိုင်သောအကောင်းဆုံးတရုတ်တက်ဘလက်များ၏အတိုချုပ်အဆိုပြုချက်ဖြစ်သည်။ သင်လေ့လာခဲ့ပြီးဖြစ်သကဲ့သို့၎င်းတို့အများစုသည်တူညီသောရှုထောင့်ကို“ နှိပ်” သည်။ operating system ကိုနောက်ဆုံးပေါ်ဗားရှင်းသို့ပုံမှန်အားဖြင့်မွမ်းမံသော်လည်း၊ ၎င်းသည် Android အတွက်ပြendနာကြီးတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့သိပြီးဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုလျစ်လျူရှုပါက၊ ယခင်မော်ဒယ်များသည် ၀ ယ်ယူရန်ကောင်းလိမ့်မည်။ သင့်လိုအပ်ချက်နှင့်အကိုက်ညီဆုံးသောတက်ဘလက်ကိုအမြဲတမ်းရှာဖွေရန်မမေ့ပါနှင့်ဘယ်သူမှမပြောတာကအကောင်းဆုံးပါပဲ
Androidsis မှာကျွန်တော်တို့ဟာ Manichean လွန်းဖို့မကြိုးစားဘူးဆိုတာသင်သိပြီးပါပြီ။ ပိုကောင်းတဲ့အရည်အသွေးတွေနဲ့ပိုအရည်အသွေးမြင့်တဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေရှိတယ်ဆိုတာရှင်းနေပါတယ်၊ ဒါကြောင့်လည်းတခြားသူတွေထက်ပိုကောင်းတဲ့တက်ဘလက်တွေလည်းရှိနေတယ်၊ ​​ဒါပေမယ့် push ကိုတွန်းထုတ်တဲ့အခါမိုဘိုင်းဖုန်းအကြောင်းပြောတဲ့အခါမှာဖြစ်တတ်တယ်၊ အကောင်းဆုံးတက်ဘလက်သည်အသုံးပြုသူတစ် ဦး ချင်းစီ၏လိုအပ်ချက်များနှင့်မျှော်လင့်ချက်များနှင့်အကောင်းဆုံးကိုက်ညီသောတစ်ခုဖြစ်သည်ဆိုလိုသည်မှာ၊ ဗီဒီယိုဂိမ်းများကိုစိတ်ထက်သန်နေသောသင်အတွက်၊ သင်၏တက်ဘလက်သည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ အရေးအသားအဖြစ်စာအရေးအသားနှင့်စာဖတ်ခြင်းကိုအထူးပြုထားသည့်ကျွန်ုပ်အတွက်မူကျွန်ုပ်အတွက်အကောင်းဆုံးမှာသတ္တုတွင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ငါတို့နှစ် ဦး စလုံးသည်ကျွန်ုပ်တို့၏လိုအပ်ချက်များအတွက်အကောင်းဆုံးအဖြေရှိသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့နှစ် ဦး စလုံးမှန်တယ်။
သို့သော်သူကပြောသည်နှင့်အတူ, များစွာသောရှိပါတယ် ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းစောင့်ကြည့်ရမည့်အခြေခံဝိသေသလက္ခဏာများ အကောင်းဆုံးတရုတ်သင်ပုန်းတစ်ခုရွေးသောအခါဂရုစိုက်ပါ
အဆိုပါ operating system ကို။ ဒီနေရာမှာ Android မှာအလုပ်လုပ်တဲ့တက်ဘလက်တွေအကြောင်းပြောမယ်၊ ဒါပေမဲ့ဒီစနစ်နဲ့ကပ်နေမယ်ဆိုရင်ဖြစ်နိုင်သမျှနောက်ဆုံးပေါ်ဗားရှင်းရှိတဲ့တက်ဘလက်ကိုရွေးရမယ်ဆိုတာသိသာတယ်၊ သင်သိတဲ့အတိုင်းဒါဟာများသောအားဖြင့်အတော်လေးခက်ခဲပါတယ် ။
ဖန်သားပြင်။ ကျနော်တို့မျက်နှာပြင်အကြောင်းပြောသောအခါ, ငါတို့က၎င်း၏အရွယ်အစားနှင့်၎င်း၏အရည်အသွေးကိုဆိုလိုတာ။ သင်ပိုမိုကြည့်ရှုရန်၊ အလုပ်အတွက်သို့မဟုတ်သင့်တွင်အမြင်အာရုံပြproblemနာရှိပါကပိုမိုကြီးမားသောမျက်နှာပြင်ကိုအမြဲတမ်းအကြံပြုလိုပါသည်။ ထို့အပြင်၊ အကယ်၍ သင်ကရုပ်ရှင်နှင့်စီးရီးများစွာကိုကြည့်ရှုရန်သို့မဟုတ်ဂိမ်းကစားရန်အသုံးပြုမည်ဆိုပါကရုပ်ပုံအရည်အသွေးကောင်းနိမ့်ဆုံး Full HD လိုအပ်သည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်သင်က၎င်းကိုရံဖန်ရံခါအသုံးပြုလိုပါက ၇ သို့မဟုတ် ၈ လက်မဖန်သားပြင်သည်သင့်အတွက်လုံလောက်နိုင်သည်။
သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူ။ မျက်နှာပြင်၏အရွယ်အစားနှင့်တိုက်ရိုက်ဆက်စပ်သယ်ဆောင်ရခြင်းအချက်ဖြစ်ပါသည်။ ငါတို့တက်ဘလက်နဲ့နေရာတိုင်းသွားချင်ရင်ပေါ့၊ ပေါ့ပါးပြီးစီမံခန့်ခွဲနိုင်လေလေ၊ အဲဒါကိုအိမ်ထဲကထုတ်ယူမယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး။
ပါဝါနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်။ နောက်တစ်ကြိမ်ကျွန်ုပ်တို့၏တက်ဘလက်ကိုပေးမည့်အသုံးပြုမှုသည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ရှင်းနေသည်မှာအီးမေးလ်ကိုစစ်ဆေးရန်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏လူမှုရေးကွန်ယက်များကိုစီမံရန်သို့မဟုတ် YouTube တွင်ဗီဒီယိုများကြည့်ရှုရန်၊ အလယ်အလတ်တန်းစားပရိုဆက်ဆာနှင့် Gigabytes RAM စုံတွဲသည်လုံလောက်လိမ့်မည်။ အခုဆိုရင်ငါတို့က၎င်းကိုသုံးပြီး applications တော်တော်များများကိုတစ်ချိန်တည်းမှာစီမံခန့်ခွဲတာမျိုးလုပ်မယ်၊ ဒါမှမဟုတ်ဂရပ်ဖစ်ကြွယ်ဝတဲ့ဂိမ်းကစားတော့မယ်ဆိုရင် processor, coprocessor, RAM နှင့် Gigs ကိုအထူးဂရုပြုရမယ်။ , အဂရပ်ဖစ်။
ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးဆိုလိုသည်မှာဘက်ထရီ၏စွမ်းဆောင်နိုင်မှုကိုဆိုလိုသည်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင်နံပါတ်များသည်အရာရာမဟုတ်ကြောင်းနှင့်အလားတူဘက်ထရီများရှိသည့်တက်ဘလက် ၂ ခုအကြားတစ်ခုသည်သူ၏ပရိုဆက်ဆာသည်စွမ်းအင်ကိုပိုမိုထိရောက်စွာအသုံးပြုသောကြောင့်အခြားတစ်ခုထက်ပိုကြာနိုင်သည်။
၎င်းတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့ရွေးချယ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုစတင်သောအခါကျွန်ုပ်တို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအချက်ငါးချက်ဖြစ်သည် အကောင်းဆုံးတရုတ်တက်ဘလက်များ။ ဟုတ်ပါတယ်, ဒီဇိုင်းကိုလည်းရေတွက်, ပြီးသားအရသာကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » Android တက်ဘလက်များ » အကောင်းဆုံးတရုတ်တက်ဘလက်များ
အံ့သြစရာ တက်ဘလက်များကို Android4ဖြင့်အကြံပြုသည်
စမတ် toolbar ကို